ကလေးထိန်းချုပ်ရေးကို PC ပေါ်မှာအခမဲ့ DOWNLOAD - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
သင်သည်သင်၏ဗီဒီယိုထဲမှာရွေးချယ်ထားအပိုင်းအစသုံးစွဲဖို့သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုချုံ့, ဒါမှမဟုတ်သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုဖုန်းမြည်သံအဖြစ်ဖို့လိုအပ်လာတယ်ဆိုရင်, ပရိုဂရမ် Wave ကိုအယ်ဒီတာကိုအသုံးပြုဖို့ကြိုးစားပါ။ ဤသည် unpretentious အစီအစဉ်ကိုသင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူသီချင်းကိုဖြတ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ချုံ့ခြင်းမပြုမီသင်သီချင်းတွေကို sound volume ကိုပြောင်းလဲစေတွေနဲ့ parameters ၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကို, သင်ကမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရရမသွားပါစေလိမ့်မည်ဟုမဆိုအသုံးပြုသူစတိုင်ဖို့လက်လှမ်းရိုးရှင်းပါသည်။ လှိုင်း Editor ကိုလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီးမှသာအနည်းငယ် megabytes အထိအလေးချိန်။
Wave ကိုအယ်ဒီတာနှင့်တကွသင်အလွယ်တကူသီချင်းတစ်ပုဒ်၏အပိုင်းအစဖြတ်နိုင်ပါ။ ကြောင့်-နားထောင်ရန်ကြိုတင်နှင့်အဆင်ပြေအချိန်ဇယား၏ဖြစ်နိုင်ခြေဖို့, သင်ကတိချုံ့မှားမသွားနိုင်ပါ။
Wave ကိုအယ်ဒီတာကိုသင်သီချင်းတွေကို volume ကို သာ. သို့မဟုတ်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လုပ်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ အသံ volume ထဲမှာကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများကိုရှိပါတယ်လျှင်လည်း, သင်တို့ကိုသံကိုပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဒီချို့တဲ့ပြင်ပေးလို့ရပါတယ်။
သီချင်း၏ပမာဏပုံမှန်ပြီးနောက်သင့်ရဲ့ရှေးခယျြသောအဆင့်အထိ aligned ပါလိမ့်မည်။
သင်သည်သင်၏ PC ကိုချိတ်ဆက်ထားပြီးတစ်မိုက်ခရိုဖုန်းကို အသုံးပြု. သင့်ကိုယ်ပိုင်အသံစေနိုင်သည်။
Wave ကိုအယ်ဒီတာကိုသင်စံချိန်ချောမွေ့ကို attenuation မှ add သို့မဟုတ်ပင် (ထိုသီချင်း reverse စေ) အခွားလမ်းတဝိုက်သီချင်းတစ်ပုဒ်လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
အဆိုပါ software ကိုလူကြိုက်များအသံဖိုင်ကို formats ထောက်ခံပါသည်
Wave ကိုအယ်ဒီတာအားဖြင့်သင်တို့ကိုလူကြိုက်များကို formats အတွက်သီချင်းများတည်းဖြတ်ဖြတ်နိုင်သည်က MP3, WAV, WMA နှင့်အခြားသူများ။ သိမ်းဆည်းခြင်း MP3 နှင့် WAV ပုံစံများဖြင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Pros Wave ကို Editor ကို
1. minimalistic interface ကို;
Cons Wave ကို Editor ကို
1. အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်ထိုကဲ့သို့ FLAC အသို့မဟုတ် OGG ကဲ့သို့သောအဖြစ်ကို formats တစ်ခုနံပါတ်, စီမံဆောင်ရွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
အဆိုပါ Wave ကိုအယ်ဒီတာကိုသင်လုပ်ရပ်များ့စုံတွဲတစ်တွဲနှင့်အတူသီချင်းတစ်ပုဒ်ကနေတပ်မက်လိုချင်သောအအပိုင်းအစဖြတ်နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်ပင်အဟောင်းတွေစက်တွေအပေါ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အဆိုပါအစီအစဉ်အနိမ့်စနစ်ကအရင်းမြစ်များရှိနေသည်။
Wave ကို Editor ကိုအခမဲ့ Download
အခမဲ့အသံ Editor ကို သီခငျြးမြား၏အစာရှောင်ခြင်းချုံ့ဘို့အစီအစဉ်ကို Free MP3 Cutter နှင့် Editor ကို VSDC အခမဲ့ Video Editor ကို
လှိုင်း Editor ကို - ရိုးရှင်းသောအပေါင်းတို့နှင့်လက်ရှိပုံစံများ supporting, အသံဖိုင်တွေကိုတည်းဖြတ်များအတွက်လျှောက်လွှာသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပါတယ်။
System ကို: Windows7ကို, 8, 8.1, 10, 2000, 2003, Vista, XP
အမျိုးအစား: Windows အတွက်အသံအယ်ဒီတာ